"(...) Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony (...)" - Lio. 23:34.
Kristy no ohatra ho antsika. Nametraka ny tenany ho lohan'ny fianakavian'olombelona lzy mba hanatanteraka asa Iehibe izay tsy takatry ny olombelona satria tsy tsapan'izy ireo ny tombontsoa sy izay mety ho vita ho azy, amin'ny maha-olombelona ankohonan'Andriamanitra azy (...) Tsy fahalemena ny famindrampony fa hery mahatahotra ho famaizana ny ota (...) kanefa koa hery izay mitaona ny fitiavan'ny taranak'olombelona ho amin'izany famindrampo izany. Tamin'ny alalan'i Kristy, dia nomena fahefana hamela heloka ny Rariny, amin'izany anefa dia tsy voaisotra taminy ny fahamasinana ambony ananany na dia kely akory aza. — GCB, 01 Oktôbra 1899.
Nampianatra antsika hivavaka i Kristy: "Mamelà ny helokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay", sady nampiany hoe, "Fa raha mamela ny fahadisoan 'ny olona hianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo Izay any an-danitra." (,..)
Raha misy olona nanao fahadisoana taminao ary feno avonavona sady tsy mety mifona aminao izy, moa ve tsy hanatona azy ianao ka hilaza hoe: "Tiako ianao noho ny amin'i Kristy ka mamela anao aho noho ny fahadisoana natoanao tamiko"? Ho hitan'i Jesôsy sady hankasitrahany tokoa io asam-pitiavana io, ka araka ny ataonao amin'ny hafa no hanatanterahana izany aminao koa. — YI, 01 Jona 1893.
Tokony hananantsika ny toe-tsaina tia miantra, be fangorahana ireo izay meloka tamintsika, na miaiky ny fahadisoany izy na tsia. Raha tsy miaiky ny helony sy tsy mibebaka izy, dia ho voarakitra ao amin'ny bokin'ny lanitra ny fahotany ka hampamoahina azy amin'ny andro fitsarana. Raha miaiky sy mibebaka amin'izany kosa anefa izy, dia tokony hamela ny fahadisoany amin'ny fo sy tsy misy fepetra isika. — YI, 01 Jona 1893.
Tsy ny fananan-karena na ny toerana ambony no miantoka ny tena fahasambarana marina fa ny fananana fo madio sy tsy voaloto ary voadion'ny fankatoavana ny fahamarinana (...) Omena ny tsirairay avy ny tombontsoa hanatanteraka ny fitsipiky ny lanitra. Ny famelan-keloka tsy arahina valifaty no fanehoana io fahendrena io ary izany no tena fahatsaram-panahy marina. Ny fitiavana, toy ny an' i Kristy, ireo olona izay namolavolan'ny Tompo izany fitiavana izany no fanehoana ny tena fiovan-toetra marina. — Lt 229, 1905.